Jamaal Cali Xuseen oo ku dhawaaqay in garabkiisu qabanayaan shirweynihii aan caadiga ahayn ee maxkamadu go,aamisay | Berberanews.com
Home WARARKA Jamaal Cali Xuseen oo ku dhawaaqay in garabkiisu qabanayaan shirweynihii aan caadiga...
Jamaal Cali Xuseen oo ku dhawaaqay in garabkiisu qabanayaan shirweynihii aan caadiga ahayn ee maxkamadu go,aamisay
Hargeysa(Berberanews):-Musharaxa madaxweynaha xisbiga Ucid Jamaal Cali Xuseen ayaa ku dhawaaqay in garabka uu hoggaamiyo ee xisbiga Ucid ay maalinta bari ah qabanayaan shirweynihii aan caadiga ahayn ee maxkamadu go,aamisay.
Musharax Jamaal uu qoraal uu arintaas kaga hadlayo ku baahiyey bogiisa facebook ayaa waxa uu sheegay inayshirkaas ka soo qayb gali doonaan xubnihii ka qayb galay shirweynihii ugu danbeeyey ee shirkii golaha dhexe ee xisbiga Ucid kaas oo dhacay sanadkii 2012-kii.
Qoraalka uu musharax Jamaal kaga hadlay shirka ay qabsanayaan ayaa waxa uu u dhignaa sidan “Ogeysiin taageerayaasha: waxaanu si xushmad leh ugu baaqaynaa in shirweyne aan caadi ahayn aanu berito ku
qaban doonaa hotelka weyn ee Maanzoor hotel halkaasoo ergooyinkii shirkii ugu danbeeyey ee 2012 kii ay joogaan kuna salaysan xukunkii maxkamadda sare. Waxa kale oo joogi doona ergooyin kale oo faro badan oo matalaya goboladda dalka iyo marti sharaf kale. Mar haddii sharcigii dalku qaban waayey garabkii Faysal Cali Waraabe ee uu u hogaansami waayey xukunkii maxkamadda ee ay ahayd in shirweynaha aan caadiga ahayn la wada qaban qaabiyo gudiddii 10 ka xubnood ee matalaysay labadda garab- Waxaan dhamaan u sheegaynaa Bulshadda in shirweynihii aan caadiga ahayn uu berito ka qabsoomi doono hotel Maansoor iyadoo heshiiskii labadda garab ee 90% dhameystirmay ee xisbigga lagu soo saaray lagu ansixin doono; isla markaana qiimeyn lagu sameyn doono hogaanka sare ee xisbigga ee mugdigga geliyey xisbiggan qaran. Somaliland sharcigga ayuun baa ina deeqa. Nina nin kama weyna indho adkaan ummadda waxba laguma jiidhsiin karo.”
Previous articleMusharraxa madaxtinimada Maraykanka ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump oo weeraray Somalida
Next articleGuddoomiyaha Xisbiga ICID oo ku dhawaaqay in shorweynihiisa Xisbigu Berri qabsoomi doono